माथिमाथि सैलुङ्गेमाचौंरी चराउनेलाई «
माथिमाथि सैलुङ्गेमाचौंरी चराउनेलाई
प्रकाशित मिति : ९ पुष २०७५, सोमबार २३:०९
प्रकृतिको हराभरा दृष्य अनिप्राकृतिक स्रोतसाधन, प्रकृतिले नेपाललाई प्रथम स्थानदिएको छ ।जहाँ संसारको उच्चशिखर सगरमाथा देखी संसारको उच्च स्थानमा रहेको तिलिचो ताल समेत पर्दछ ।प्राकृतिक खोलानाला ६००० बढी नेपालमा छन् । पर्यटकिए हिसाबले साँस्कृतिक मठमन्दिरहरु । अनि जनसंख्याको हिसाबले प्रथम स्थानको लागी प्रतिस्पर्धात्मक भएको बौद्ध धर्मका जन्मदाता गौतम वुद्ध, वीर गोर्खाली सपुतहरु । यिनै यिनै कारण नेपाल पर्यटन र पर्यावरणको हिसाब विश्वको उत्कृष्ट राष्ट्रहरु मध्ये नेपालपनिउत्कृष्टमा पर्दछ । नेपालको ७७ वटै जिल्लाहरुको आ–आफ्नै पर्यटकिय विशेषताहरु रहेका छन् । ती जिल्लाहरु मध्ये पर्यटकिय हिसाबले संखुवा सभा जिल्लापनि एक पर्दछ । यस जिल्लाको अवलोकन भ्रमणको क्रममा धनकुटाको मनोरम स्थानहरु हिले, सिंधुवा, तेह्थुमजिल्लाहरुको संधेरीबाट यात्रागर्नु पर्दछ ।
यस जिल्लामा विश्वमा नपाईने तथालोप भइसकेका २८ प्रकारका गुराँसका प्रजातिहरु पाइन्छ । जुन ठाउँ तिनजुरे मिल्के जलजले नामले प्रख्यातछ । साथै यहाँको गुफापोखरी चर्चित मानिन्छ । यस स्थलको यात्रागर्दा उत्तर तर्फ बतीसै दन्तखोलेर हाँसिरहेको हिमाल बसिरहेको मनोरम दृष्यले मनमोहक बनाउँछ । जो कोही मानिसहरु यस ठाउँमा जाँदा आफ्ना पिडाहरुलाई विर्सेर सकारात्मक योजना र नयाँ जीवन प्राप्ती भएको महशुष मात्र होइन जोशजाँगर समेत पलाउँछ ।
त्यति मात्र होइन जनयुद्ध कालिन समयमा सेल्टर लिएकाती स्थानहरु, जनयुद्धको समयमा खेलमैदान रहेको तीप्राकृतिक स्थलहरु हालआएर एकादेशको कथाझैं भएका छन् । तीपर्यटकिय स्थानमा रहेका अभिभावक तथा स्थानिय समुदायहरुले उवेलादिएको वास र गाँसको अमूल्य योग्दानले अहिले नेपाल यो अवस्थामा आउन संभवभएको हो ।
ती अतितकायादहरु र लिएका सेल्टरहरुमा एकपटक पुन भ्रमणमा जाँदाथपउही वेलाको जस्तो उर्जा मिल्ने विश्वासका साथ अवलोकन भ्रमण तयार गरिएको तत्कालिन जनसेना क. चिन्तन र क. कर्मा बताउनु हुनछ । देशले कोल्टे फेरैसँगै हालविभिन्न पार्टीहरु एकताप्रक्रियामा अगाडी बढीरहेको समयमा, प्रदेश एककाभावि राज्यसत्ता सम्हाल्ने युवाहरु अहिलेको राजनीतिक फुर्सदको समयमा समयलाई सदुपयोग गर्न संखुवासभाजिल्लाको पर्यटकिय स्थलहरुको अवलोकन भ्रमणमा निस्केका छन् । भ्रमणको क्रममा गुराँस लगायत, उच्च पहाडी भेगमाभएको ताल, हिमालीहिंमश्रंखलाहरु, चौंरीतथागुफाहरुको अवलोकन भ्रमण गरिरहेका छन् ।
चर्चित गायिकाकुन्तिमोत्तानको स्वर रहेको गीतजसले माथिमाथि सैलुङ्गेमाचौरी चराउँनेलाई….भन्दिनु है भन्दिनु मेरो चुल्ठो खाली छ …………. तीखाली चुल्ठोहरुमा गुराँसको थुंगालगाउने जोवन परिकल्पनाहरु…. गर्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याएका छन् । भ्रमणको क्रममा नेकपा पार्टीकाप्रदेश एककाप्रदेश सदस्यतथावासियल केन्द्रिय सचिवमिङ्मा डण्डुशेर्पा, वासियल केन्द्रिय सचिवतथाप्रदेश एक इन्चार्ज पुर्ण भुजेल (चिन्तन), वासियलप्रदेश नम्बर एक अध्यक्ष डम्मर पुलामी (कर्मा), सुनसरी जिल्लावासियलअध्यक्षभूवनयाक्खालगायतका टोलीअवलोकन भ्रमणमा निस्केका छन् ।
स्मरण रहोस नेपालको नै ठुलो परियोनाभनेर चिनिने अरुण तेस्रो हाइड्रो पावर यसै जिल्लामानिर्माणको क्रममा अगाडी बढिरहेको छ । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र चिनसँगको वैकल्पिकनाकाहरु यही संखुवासभाजिल्लाको किमाथाङ्का बाट खुल्नलागेको छ । यसकारण प्रदेश एककायुवाहरु आफ्नो आन्तरिक पर्यटन अवलोकन भ्रमणले यि सबै विकास, भविष्य परियोजना र भावी राजनीतिककार्ययोजनाको समेत परिकल्पना गरेर आन्तरिक पर्यटन सफल रहोस सुभकामना छ ।